पात्रो फेरियोस, पात्र नफेरियोस्
प्रकासित मिति : २०७८ बैशाख १, बुधबार ०६:३९ प्रकासित समय : ०६:३९
पात्रो फेरिएको छ । पोहोरको नयाँ पात्रो योपल्ट पुरानो भएको छ । अहिलेको साललाई अर्को वर्षले विस्थापित गर्नेछ । समय उही हो । प्रकृतिका नियम उही हुन । बस् अंक बदलिएको हो । अघिल्लो साल पुराना बनून भनी कामना गरिएका घाउका खोटहरु यसपल्ट के भए ? बलिया बनून सम्बन्धका बोटहरु भन्ने कामनाले कति आकार पायो ? शिरमा फुलून सुख शान्ति र सुसम्बन्धका नोटहरु भनी पाएका आशिर्वचन कामयाव भयो, भएन ? नयाँ वर्ष शुभकामना मात्र नभई समीक्षा गर्ने साइत पनि हो । शुभकामना दिनुलाई नै पहिलो र अन्तिम कर्तव्य ठान्ने हो भने त्यो कर्म पानीले पानीमा पानी लेख्नु शिवाय केही हुन्न । पात्रो फेरिए पनि पात्र फेरिनुहुन्न । मानवताको दीयो निभ्नुहुन्न ।
कामयाव मानिसका लागि हरेक समय साइत हो । मेहनती मानिसले तीतेपातीबाट मह निकाल्न सक्छ । घोडाको लिदी पछ्याएर घोडा पत्ता लगाउन सक्छ । समय आफैंमा शुभ, अशुभ हुँदैन । समय सङ्लो पानी हो, यसमा कस्तो रंग भर्ने त्यो मानिसको कर्ममा निर्भर छ । यसैमा परिणाम निर्भर रहन्छ । ०७७ सालले के दियो ? ०७८ सालसंग हामीले के अपेक्षा गरेका छौं ? हो, अघिल्लो साल तपाईंले के रोप्नुभयो ? नयाँ साल त्यही फल्ने हो । लोटा लिएर समुद्रमा पानी भर्न गयो भने समुद्र हैन, त्यही लोटाभरि पानी आउने हो । निस्क्रिय बस्ने अजिंगरको मुखमा त आहार आउँदैन भने प्रकृतिको नियम मानिसको सन्दर्भमा पनि उही नै हो ।
नयाँ साल मात्र हैन, जुनसुकै समय सत्कर्म गरौं । सकिन्छ मानव कल्याण गरौं, सकिन्न अकल्याण नगरौं । सत्पात्र बाचौं, सत्पात्र बन्न प्रेरित गरौं । देशलाई माया गरौं । माटोभन्दा ठूलो सुगन्ध पृथ्वीमा कुनै छैन । आफूलाई सम्मान अनि प्रेम गरौं । सम्मान र प्रेमको यात्रा परिवारबाट आरम्भ हुनुपर्छ । कुरा कम, कर्म बढी गर्ने प्रेरणा मिलोस् । मान्छेले मान्छेलाई प्रेम खन्याइरहने हो भने त्यो संसारकै अखण्ड यज्ञ हुनेछ । सबैभन्दा ठूलो कुरा देशभित्र परदेश र परदेशभित्र देश खोज्ने नेपाली संस्कृतिले यो सालबाट विश्राम पाओस् । कोटी कोटी शुभकामना ।